भदौ १९, २०७४ सोमवार ११:४४:०० प्रकाशित
लुतोले मानिसलाई निकै सताउँछ। यदि लुतो लागेमा चिलाउँदा–चिलाउँदै दिक्क भइन्छ। कहिले लुतो हराउला भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताएको हुन्छ। लुतो कसरी आउँछ र यसबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्नेबारे जानकारी राखिरहनु राम्रो हो।
के हो लुतो?
यो रोग प्राय गर्मी महिनामा शरीरमा सरसफाइको कमीले आउने गर्छ। लुतो ‘सार्कोप्टिस स्क्याबी’ जीवाणुले ल्याउँछ। यदि शरीर फोहोर छ भने लुतोका किटाणु शरीरभित्र छिर्छन्। लुतोका किटाणुले रातिको समयमा रगत चुस्ने हुदाँ लुतो राति बढी चिलाउँछ। यो रोगका किटाणुले कमलो र न्यानो भागमा गएर रगत चुस्न मन पराउँछ। लुतोका किटाणु मेल र फिमेल हुन्छन्। शरीरभित्र छन् भने लुतोका किटाणुको जीवनकाल ६ हप्ताको हुन्छ। यसले नरम छालालाई बढी संक्रमित गर्छ। यो सरुवा रोगका किटाणुले सामान्य मानिसलाई संक्रमण गर्न एक महिना लाग्छ।
कसरी चिन्ने लुतो?
एलर्जी लागेको, जुम्राले टोकेको, किराले टोकेको भन्दा फरक हुन्छ लुतो। लुगा चेन्ज गरेर तातो गरेर बस्यो भने लुतो चिलाउँछ। कहिलेकाहीँ कन्याउँदा–कन्याउँदै घाउ बन्छ र यो पाक्न सक्छ। लुतो नरम छाला भएको ठाउँमा आउँछ। लुतो पनि भिन्न–भिन्न प्रकारका हुन्छन्। यो एक प्रकारको यौन रोग हो। यो पसिना आउने ठाउँमा बढी आउँछ। सरुवा रोग भएकाले एक पटक हामीले चिलाएर त्यही हातले अर्को ठाउँमा चिलाउँदा लुतो सर्ने गर्छ।
लुतोको उपचार सम्भव छ। लुतोको किटाणु एकदेखि दुई दिनसम्ममा मर्छन् यदि मानिसको शरीरमा पसेको छैन भने। त्यसैले लुतो निखार्नु छ भने लुतो लागेको मानिसले लगाएको लुगा राम्रोसँग धोएर घाममा सुकाउनुपर्छ। परिवारका सबै सदस्यले उपाचार गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने लुतो निख्रिन सक्छ। चिकिस्सकको सल्लाह बमोजिन लुतोको उपचार गर्नुपर्छ यो निको हुन्छ र सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी छ।
लुतो लाग्न नदिन के गर्ने
लुतो आउन नदिन सरसफाइमा ध्यान दिन जरुरी छ। एक जनालाई लुतो लागेको छ भने परिवारका सबै सदस्यले लुतोको उपाचार गर्नुपर्छ। लुतो आएको व्यक्तिले राम्रोसँग नुहाएर चिकिस्सकको सल्लाह बमोजिन औषधि प्रयोग गरी सफा लुगा लगायो भने यो रोग निको हुन्छ। हामीले लगाएको लुगा नियमित धुनुपर्छ। नुहाउँदा मिचिमिचि नुहायो भने यो रोग फैलन पाउँदैन। लुतो लागेको मानिसका लुगा अरु मानिसले लगायो भने रोग सर्छ। सकभर अरुका लुगा लागाउनु हुँदैन, लगाउनै परे राम्रोसँग धोएर, घाममा सुकाएर लगाउनुपर्छ।
(छालारोग विशेषज्ञ डा भट्टराई काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छिन्)